DOWNLOAD Boeing F / A 18E Super ebu FS2004 - Rikoooo
downloads 31 929
Emelitere ikpeazụ 30 / 11 / 2009The Boeing F / A-18E / F Super ebu bụ a 4.5 + ọgbọ ụgbọelu dabeere multirole fighter ugbo elu. The F / A-18E otu-n'oche variant na F / A-18F tandem oche-variant bụ ibu ọzọ elu nkwekọrịta nke na F / A-18C na D ebu. The Super ebu nwere esịtidem 20 mm egbe na ike na-ebu ikuku na-ikuku ụta na ikuku na-elu na ngwá agha. Ọzọ mmanụ ụgbọala nwere ike rụrụ na ise mpụga mmanụ ụgbọala tankị na ugbo elu nwere ike ahazi dị ka ihe airborne tanka site na-agbakwụnye na mpụga ikuku refueling usoro.
E mere na ibido emepụta site McDonnell Douglas, ndị Super ebu ụzọ ama na 1995. Full-ọnụego mmepụta malitere na September 1997, mgbe na mmakọ nke McDonnell Douglas na Boeing aga na ọnwa. The Super ebu banyere ọrụ na United States Navy na 1999, dochie F-14 Tomcat ebe ọ bụ na 2006, na-eje ozi n'akụkụ mbụ ebu. Na 2007, ndị Royal Australian Air Force nyere iwu Super Hornets dochie ya merela agadi F-111 nsoro. (Isi wikipedia)
Ihe efu add-on nke nwere ike ịka mma karịa paware! Graphicsdị ndị mara mma na usoro ụgbọ elu dị ịtụnanya! A na - emepụtakwa nsonaazụ nke G n'ụzọ zuru oke ma na - ebuso agha ọkụ. Igwe olile nzuzo a dịkwa ugbu a ma na-arụkwa ọrụ.
-Agụnye ihe karịrị 60 variants